गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » चीनसँग सीमा विवाद छैन, कसलाई खुसी पार्न समिति बनाएको ? : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनसँग नेपालको कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सीमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर मित्र राष्ट्रसँग अनावश्यक विवाद निकाल्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चीनसँग सीमा विवाद छैन । चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, यो समितिले सीमा विवाद देखाओस् ।
कसलाई खुसी पार्न समिति बनाएको ?” उहाँले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी झुक्याएर पारित गर्न लागेको समेत दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीबारे बोल्दैनन्, भन्दैनन् । झुक्याएर पास गर्न लागेका छन् ।
एमसीसीबारे गठबन्धन दलले बोल्नुपर्दैन ? जनतालाई बताउनुपर्दैन ?” नेकपा (एमाले) काठमाडौँ महानगर कमिटीद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित भेलामा अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्नसमेत कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
तुइनपछि हेलिकोप्टर, प्रतिक्रियाविहीन सरकार
दार्चुलाको आकाशमा बेलाबेलामा भारतीय हेलिकोप्टर
राजमार्गमा विमान अवतरण केपी ओलीको सपना अलपत्र
लगातारको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा परेर ९ जनाको मृत्यु
नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन निर्वाचन आजबाट सुरु
दुईपटक स्थगित भइसकेको कक्षा १२ को परीक्षालाई लिएर आयो नयाँ अपडेट
प्रचण्डका कारण एमाले विभाजन : पोखरेल